News - WPC ကုန်းပတ်ခန်းကိုဆေးသုတ်လို့ရလား။
WPC ကုန်းပတ်သည် အတိုကောက် သစ်သားပလပ်စတစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပို၍ လူကြိုက်များသည်။ ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသည့်အခါ WPC ကုန်းပတ်သည်ပန်းချီကားမျှမဟုတ်၊ ကော်ကော်လည်းမရှိ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်သည် ဟူ၍ အမြဲတမ်းပြောတတ်သည်။ ထို့နောက်တစ်စုံတစ် ဦး က WPC ကုန်းပတ်ပြားများကိုဆေးသုတ်နိုင်သည်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးမည်လော။ , အပြင်ဘက်ပေါင်းစပ် WPC ကုန်းပတ်ဆေးသုတ်ပုံကို?
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါတို့ကပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်ပုံကိုပန်းချီဆွဲနိုင်တယ်၊ ဒါကတခြားသစ်မာတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအရောင်အချို့ကိုလိုချင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်သည်အနည်းငယ်နွမ်းနေသဖြင့်ကိစ္စရပ်များကိုသင်၏လက်ထဲသို့ယူရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ဖြီးကိုပြင်ဆင်သင့်သည်။ ပန်းချီကားအချို့နှင့်အခြားလိုအပ်သောကိရိယာများ ပြင်ပ WPC ကုန်းပတ်.
ပထမ ဦး စွာအပင်များကိုဖယ်ရှားပါသို့မဟုတ်ဖုံးပါ။ အကယ်၍ သင်၏ WPC ကုန်းပတ်ပေါ်၌သစ်တောများရှိပါကသင်ဖုံးအုပ်ထားသောသစ်ရွက်များကိုပတ္တူစများသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်စက်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ပါသို့မဟုတ်၎င်းတို့မှဖယ်ထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ WPC ကြမ်းပြင်.
ဒုတိယအချက် - သင်၏ deck ကိုသန့်ရှင်းပါ။ အချို့သော WPC ပျဉ်ပြားများကိုကိုယ်ပိုင်အတွက်အသုံးပြုပါ။ ဆေးကြောရန်ပြင်ဆင်နေစဉ် WPC ပေါင်းစပ်ထားသောကုန်းပတ်ကိုအလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ အခြေခံအပျက်အစီးများနှင့်ဖုန်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဆပ်ပြာရေအရောအနှောနှင့်အနိမ့်ဖိအားပါဝါအဝတ်လျှော်သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းသော brush ။ အနာနှင့်မှိုများကိုဖယ်ရှားရန်အတွက်သင်သည်ပုံးရည်နှင့်ရေတစ်ပိုင်းကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်း ခွဲ၍ ပုံးတစ်ပုံးထဲသို့ရောနှောချင်သည်။ ရှင်းလင်းစွာဆေးကြောပြီးခြောက်သွေ့အောင်ပြုလုပ်ပါ။
တတိယအချက် - ပေါင်းစပ်ထားသောကုန်းပတ်ကိုသုတ်ပြီးချုပ်ပါ။ ဆေးသုတ်နိုင်သောအချောမွေ့သောသုတ်လိမ်းရန်အတွက်သုတ်ဆေးဘုတ်များကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ချောမွေ့စေရန်သင်၏ WPC သစ်သားကုန်းပတ်သဲကဆန်ကို ဦး တည်။ သွားနိုင်သည်။ ရိတ်ခြင်းကိုသုတ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး တံမြက်စည်းနှင့်တစ်ချိန်ကရေနှင့်ရေဆေးကြောပါ။ တစ်ခု acrylic စေးပြင်ပ primer ရွေးချယ်ပါနှင့်သင်၏ roller ဗန်းသို့ပုံးကိုသွန်းလောင်း။
စတုတ္ထ - မင်းဆေးထိုးပါ ပြင်ပ WPC ကုန်းပတ်primer သည် ၁၀၀% ခြောက်သွေ့လျှင်သင်လောင်းနိုင်သည်
သင်၏ပြင်ပမုတ်နံရံဆေးကြောစက်ထဲသို့ roller tray ထဲသို့သုတ်လိမ်းပြီးအလုပ်လုပ်ပါ။ ထပ်မံ၍ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒုတိယကုတ်အင်္ကျီမဖြည့်ခင်ပထမလျှောက်လွှာခြောက်သွေ့စေရန်သေချာပါစေ။ အပူချိန်သည်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်မည်သည့်အရောင်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သနည်း၊ သင်ပထမ ဦး ဆုံးပန်းချီကားကိုသာပြင်ဆင်သည်။ WPC ထုတ်ကုန်များနှင့်သဘာဝကျသောဘဝကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
post အချိန်: ဇွန် -9-2021
သစ်သားပလပ်စတစ်ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, WPC ပေါင်းစပ်ကုန်းပတ်, အပြင်ဘက် WPC ကုန်းပတ်, WPC ကုန်းပတ်, WPC ကြမ်းပြင်, WPC ပြင်ပကုန်းပတ်,